3.1 Raadi boqolleyda
Waa maalin ay ardaydu leeyihiin ciyaaraha oroddada. Waxaa billadda la siin doonaa fasalka ay ka joogaan ardayda ugu badan.
Fasalka 9 A waxaa dhigta 25 arday. Waxaana ka jooga maanta 19 arday.
Taasi macnaheedu waa 25 tii arday ee fasalka 9 A waxaa ciyaarta kasoo qeyb galay 19 arday.
Fasalka 9 B waxaa dhigta 20 arday. Waxaana ka jooga maanta 15 arday.
Taasi macnaheedu waa 20 tii arday ee fasalka 9 A waxaa ciyaarta kasoo qeyb galay 15 arday.
Sidee haddaba la yeelayaa si loo ogaado labada fasal midka ay ka joogaan ardayda ugu badan?
Si la isku barbardhigo waxaan adeegsaneynaa xisaabta boqolleyda.
Waxaan xisaabeynnaa ardayda joogi laheyd haddii ay labada fasal dhigan lahaayeen tiro arday oo isku mid ah, sida 100 arday. Haddaba aan xisaabta u qorno marka hore qaab jajab ahaan ah, annaga oo siineyna hooseeyayaal isku mid ah.
Hadda wey sahlan tahay in la isla barbardhigo!
76 % ardayda dhigata fasalka 9A wey joogaan ciyaarta, halka fasalka 9 B ay ka joogaan 75 %. Sidaas daraadeed, fasalka 9A ayaa noqday midka ardayda ugu badan ay ka joogaan ciyaarta, sidaasna ugu guuleystay biladdii.
Waxaad xisaabi kartaa boqolleyda haddii aad taqaanid qeybta iyo tirada guud.
Dalka Iswiidhan waxaa ku noolaa taariikdu markii ay aheyd 31-dii Disembar 2006, 1 407 qof oo ay da'doodu ay la ektahay ama ka weyn tahay 100 sano. 219 ka mid ah dadkaas waxay ahaayeen niman. Immisa ayaa boqolkiiba niman ahaa dadkaas?
Qeybta: 219 (tirada nimanka)
Tirada guud: 1 407 (tirada guud)
Boqolleyda (qeybta nimanka) = 219/1 407 = 0,16 = 16 %